होसियार !!! यस्ता लक्षण देखिएमा तपार्इकाे मृगौला फेल हुनसक्छ ! – Etajakhabar
होसियार !!! यस्ता लक्षण देखिएमा तपार्इकाे मृगौला फेल हुनसक्छ !
एजेन्सी । मृगौला फेल हुनु भनेको अन्तिम अवस्थामा मृगौलाले काम नगर्नु हो । यदि कोही व्यक्तिको मृगौला फेल भएको छ भने त्यसका लागि केही पनि गर्न सकिँदैन । यसका लागि डाइलासिस एकमात्र विकल्प हो । यसको माध्यमबाट शरीरको विकार पदार्थहरु बाहिर निकाल्ने काम गर्छ ।
मृगौलासम्बन्धी केही समस्या भएमा पहिला चिकित्सकको सल्लाह लिनु जरुरी हुन्छ । अाज हामी तपाईलाई मृगौला फेल हुँदा के कस्ता लक्षणहरु देखिन्छन् त्यो बारे जानकारी गराउने प्रयास गरेका छौ । जसले तपाईको स्वास्थ्य हेरचाहमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।
छालामा असामान्य रुपमा डाबर अाउनु
किड्नीमा समस्या हुँदा शरीरमा विभिन्न प्रकारका डाबरहरु अाउँछ । शरीरमा विषाक्त पदार्थ जम्मा हुने हुँदा छालामा रेसा तथा डाबर अाउँछ ।
किड्नीको एक मुख्य काम शरीरमा राता रक्तकोष निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउँछ । दुर्भाग्य जब मृगौला फेल हुन सुरु गर्छ राता रक्तकोष निमार्णमा कमी अाउँछ जसकारण एनिमिया हुन्छ ।
बान्ता अाउनु र खानाको स्वादमा कमी अाउनु
पिसाब कम अाउनु
माथिका लक्षणका साथै पिसाब कम अाउँछ भने किड्नीको समस्या भएको छ भनेर अनुमान भने लगाउन सकिन्छ ।
फिँजजस्तो पिसाब अाएमा
शरीरमा अवांछित पदार्थ अावश्यकभन्दा बढी जम्मा हुँदा यस्तो खाले लक्षण महशुस हुने गर्छ । चिकित्सकका अनुसार मृगौला बिरामीहरुमा यस्तो लक्षण अाएमा दोस्रो चरणमा पुगको भन्ने बुझिन्छ । यस्तो लक्षण देखा परेमा चिकित्सकको सल्लाह लिनु उचित हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ०१, २०७४ समय: १६:३४:१९